Farqiga Waxbarasho ee K-12 ee Minnesota: Sababaha, Saamaynta, iyo Fursadaha. – Bayan Research
Leave a Comment	/ Tayo / By mohamed
Bayan Research Center | BRC
|Madasha Wacyigelinta |Barnaamijka Tayo – Qaybta 2aad |April 11, 2021 |Page 1
Farqiga Waxbarasho ee K-12 ee Minnesota: Sababaha, Saamaynta, iyo Fursadaha. |Madasha Wacyigelinta |Barnaamijka Tayo – Qaybta 2aad |April 11, 2021 __________________________________________________
|Madasha Wacyigelinta |Barnaamijka Tayo – Qaybta 2aad |April 11, 2021 |Page 2
Haddaba iyada oo laga duulayo muhiimadda iyo baahida loo qabo barnaamijka TAYO, ayaa Xarunta Cilmibaarista Bayaan oo ah xarun bulsheed, oo aan faa’iido doon ahayn, isla markaana abuuraysa deegaan aqooneed togan, kuna qotoma fikradaha/ aragtiyaha, waxay soo qaban qaabisay Fagaaraha Tayo – Qaybta 2aad, oo qayb ka ah Madasha Wacyigelinta ee BRC. Qaybtaan 2aad ayaa xoogga lagu saarayaa Farqiga Waxbarasho ee K-12 ee Minnesota: Sababaha, Saamaynta, iyo Fursadaha.
1. Cabdisalaan Aadan – Aqoonyahan, khabiir arrimaha waxbarashada
2. Axmed Cali – Tababare iyo Macallin
3. Kaltun Kaarane – La-taliye arrimaha waxbarashada 4. Cabdirisaaq Cabdi – Maamulaha Humboldt High School
SABABAHA KEENA FARQIGA GUULEED EE U DHAXEEYA ARDAYDA
Cabdisalaan Aadan, ayaa ugu horrayn falanqeeyay sababta keentay in ay ku kala duwanaadaan tayada waxbarasho iyo waxsoosaarka aqooneed ardayda caddaanka ah iyo kuwa ajaanibta ah ee Minnesota ku sugan. Dr-ka oo hadalkii ku bilaabay u mahadcelinta BRC iyo hawl-wadeennadeeda, kadibna gudaha usii galay in uu sharraxo sababaha ugu waaweyn ee kaana farqiga aqooneed ee u dhaxeeya ardayda caddaanka ah iyo kuwa madowga ah, wuxuuna kusoo koobay soojeedintiisii 1aad laba qodob oo kala ah: 1. In uu daciif yahay habka Dastuurka Minnesota uu u qeexayo qodobka waxbarashada.
2. Macallimiinta kasoo jeeda dadka laga tiro badan yahay oo ku yar goobaha waxbarashada.
|Madasha Wacyigelinta |Barnaamijka Tayo – Qaybta 2aad |April 11, 2021 |Page 3
Cabdirisaaq Cabdi, oo ah Maamulaha Humboldt High School oo ah dugsi dhexe/ sare ayaa sheegay in ay ka leeyihiin arrimaha la xiriira farqiga u dhaxeeya ardayda caddaanka ah iyo kuwa kasoo haray [5 Istiraatiijiyad-mustaqbaleed], kuwaas oo uu ku xsheegay:
1. In si gaar ah diiraadda loo saaro ardayda loo yaqaan [Students Color] ee aan caddaanka ahayn. Si waxbarashadooda kor loogusoo qaado. 2. Ardayda dhigata luuqadda English ka – English-Language Learner – in ay ay dugsiyadu keenaan dhinacyada ay diiradda saarayaan [Focus Area]
3. In Diiraadda la saaro ardayda dhigata Waxbarashada Khaaska ah.
4. In kor looqaado diyaarinta ardayda inta aysan bilaabin waxbarashada nidaamiga ah.
5. Xisaabta iyo Akhriska in si gaar ah loo bartilmaameedsado, waayo marka la cabbirayo aradgani ma gaaray meeshii laga rabay waa akhriska iyo xisaabta.
ARDAYDA IYO COVID-19
Kaltun Kaarane, ayaa dhanka kale soo jeedisay talooyin ku aaddan ardayda iyo marxaladda caabuqa Covid-19:
“Dadka dugsiyada jooga ee macallimiinta ah ayaa laga rabaa in ay ogaadaan in ilamahaani u baahan yahay la talin iyo hagid saykoolojiyadeed maadaam uu kasoo laabtay marxalad go’doon ah oo uu Online wax ku dhiganayay. Dhanka kale, ardaydu waxay u baahan yihiin in loo muujiyo dareen saaxiibtinnimo oo keliya dhanka Academic ga aan xoogga la saarin..”
Dhanka kale, Kaltuun ayaa sharraxday sida waalidku ay uga qayb qadaan karaan kasoo kabashada caruurta ee dhibaatooyinka caabuqa Covid-19. Waxa ayna hoos ka xarriiqday in waalidku qayb weyn ka yihiin dhiirranaanta ilmaha, iyada oo sheegtay in ay muhiim tahay in ilmaha lagu xiro markasta dadaalka oo aan la oran [waad maskax badan tahay, balse aad tiraahdo waad dadaal badan tahay waad gaari kartaa]. Waayo waxa ay taasi ka qayb qaadanaysaa in ilmuhu markasta isku xiro dadaalka oo uusan is dhigan.
|Madasha Wacyigelinta |Barnaamijka Tayo – Qaybta 2aad |April 11, 2021 |Page 4
Axmed Cali, ayaa sidoo kale, ka sheekeeyay dhibaatooyinka ardayda kasoo gaaray marxaladdan lagu jiro, gaar ahaan kuwa dhigta Luuqadda English-ka. Isaga oo sheegay dhanka kale in ceeb wayn ay soo baxday iyo firaaq maadaama la ogaaday in ay ardayda ku adag tahay isticmaalka tiknoolojiyadda sida Kambiyuutarka Iwm.
FURSADAHA ARDAYDA IYO TALOOYIN GUUD _____________________________________
Cabdisalaan Aadan, ayaa dhanka kale ka warbixiyay fursado waxbarasho oo ardaydu helikaraan oo loo baahan yahay in waalidku la socdaan, fursadahaas waxaa kamid ah:
 Deeqo waxbarasho.
 Waxaa jira barnaamijyo tayada ardayda kor u qaadaya sida barnaamijka loo yaqaan International Baccalaureate (IB), oo isaguna ah fursad kale.
 Sidoo kale waxaa jira fursad u furan ardayda ka qalin jebisa dugsiga sare oo sida barnaamijka loo yaqaan Post Secondary Enrollment Options (PSEO).  Waxaa jira dugsiyo habeenkii la aado ama Online schools.  Waxaa jira xarumo loo yaqaan [Academic Supporting Center] oo waalidku ardayda geyn karaan halkaas oo ardaydu macallimiinta fool ka fool ula kulmayaan.
Sidoo kale, Cabdisalaan Aadan, ayaa xoojiyay in ay muhiim tahay in ardayda Soomaaliyeed takhasuska badiyaan, si aan bulshada uga dhex muuqanno. Tan kalena, dhanka dhaqaalaha waxa uu xoojiyay khabiirku in aan xoogga la saarin oo aan kulliyadaha lagu dooran dhaqaale mallagu helayaa, ardayduna waa in ay doortaan kulliyado ka turjumaya baahida suuqa. Sidoo kale, Cabdirisaaq Cabdi, oo ah Maamulaha Humboldt High School, ayaa sheegay in waalidiinta u badan la socodka ilmaha, lana socda xaaladdooda in ay yihiin waalidka caddaanka ah, taladiisuna waxay ahayd in waalidiinta soomaaliyeed ay gutaan waajibka saaran, waliba ay xaqooda tahay in ay ogaadaan xaaladda ilmahooda. Dhanka kale Cabdirisaaq, ayaa kula dardaarmay macallimiinta Soomaaliyeed in ay waalidka u sharraxaan xuquuqda ay leeyihiin iyo muhiimadda ay leedahay in ilmaha, waalidka iyo macallinku ay isku xiran yihiin.
|Madasha Wacyigelinta |Barnaamijka Tayo – Qaybta 2aad |April 11, 2021 |Page 5
Doodda oo ay ka qayb-qaateen aqoonyahan baac dheer ku leh waxbarashada, dowrar kala duwanna ku dhex leh bulshada waxa ay kusoo idlaatay si qurux badan. Talooyin iyo bogaadin ay soo jeedinayeen aqoonyahankii kasoo qaybgalay kulanka kadib Sh. Hassan Hade oo ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan –BRC- kulankana socodsiintiisa iyo isku xirkiisa lahaa ayaa u mahadceliyay dhammaan dhegeystayaashii iyo kasoo qayb galayaashii doodda oo ay ugu horreeyeen aqoonyahankii qiimaha badnaa ee martida ku ahaa kulanka.